जनकपुरका जनताको प्रश्न- ‘नाम मात्रका उप-महानगरवासी बनेर के गर्ने ?’ « News24 : Premium News Channel
जनकपुरका जनताको प्रश्न- ‘नाम मात्रका उप-महानगरवासी बनेर के गर्ने ?’
जनकपुरधाम, १९ असार । प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुरधाममा कुल १६ वडाहरू मात्रै थिए । पछि जनकपुरधामलाई उपमहानगरपालिका बनाउँदा ९ वटा वडालाई थपेर उपमहानगरपालिका बनाइयो । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि स्थानीय तहरुको चुनाव भयो । चुनावबाट झण्डै २० वर्षपछि जनताले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पाए ।
स्थानीयवासी खुसी पनि थिए । २० वर्षदेखि जनप्रतिनिधविहिन रहेको अवस्थामा जनप्रतिनिधिहरू आएपछि विकासको लहर आउँछ भन्ने विश्वास लिएका थिए । तर जनकपुरधामवासी भएपछि पनि गाभिएका वडाका वासिन्दा आफूहरु अझै विकासको अनुभूति गर्न नसकेको बताउँछन् ।
साढे ३ वर्षअगाडि जनकपुरधामलाई उपमहानगरपालिका बनाउँदा जस्तैः देवपुरा रुपैठा, विन्दही, वसविट्टी, कनकपट्टी, मनहरपुर लगायतका विभिन्न गाउँहरु समेटेर ९ वटा वडा थपिए । थपिएका ती वडाहरूमा अहिले पनि विकासले नछोएको स्थानीयको गुनासो छ ।
थपिएका गाउँहरुमध्ये एक हो- वसविट्टी, जो अहिले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर २२ मा पर्छ । वसविट्टी ऐतिहासिक तथा पौराणिक हिसाबले जनकपुरधामको महत्वपूर्ण स्थल हो । यो वडा भएर पवित्र दूधमती नदीको बहावसमेत रहेको छ । यहाँ प्रत्येक वर्ष जानकी नवमीका दिन साधु सन्तहरु हजारौँको संख्यामा शाही स्नान गर्ने गर्छन् । जनकपुरधामको लागि यति महत्वपूर्ण स्थल रहेको वसविट्टी प्रवेश गर्नेबित्तिकै हिलाम्मे सडकले स्वागत गर्छ । लाग्दैन, त्यहाँ विकासको लहर चलेको छ ।
त्यहाँका जनता भन्छन्- “हामीहरु पहिलेभन्दा बढी कर बुझाउँदै आइरहेका छौँ, तर विकास मानौँ पहिलेभन्दा पनि सुस्त गतिमा भइरहेको छ,’ स्थानीय राम नरेश यादवले गुनासो पोखे । उनले भने, ‘बजेट प्रत्येक वर्ष आउँछ भन्ने सुन्छौँ तर खोई बजेट कहाँ जान्छ, हामीलाई थाहा छैन । दुई महिना पहिलेदेखि नै वडाध्यक्षलाई भन्दै आइरहेका छौँ तर हेर्नुस् हाम्रो वडाको अवस्था नर्कजस्तै भएको छ ।’
वसविट्टीकै अर्का स्थानीय रामकिशोर पाण्डे ट्रैक्टर चालक छन् । उनको ट्रैक्टर कयाैँपटक हिलाम्मे सडकमा फसिसकेको छ । उनी भन्छन्- ‘गाडीको कुरै छोडौँ, यस्तो हिलाम्मे सडकमा त पशु-चौपायाहरू समेत फस्छन् ।’ तर जनप्रतिनिधिहरु आएको ३ वर्ष भए पनि मस्त निद्रामै सुतेको पाण्डेको आरोप छ । ‘हामी गाविस छँदा नै ठीक थियो,’ पाण्डेले भने, ‘उपमहानगरपालिकामा गाभिएपछि कर पनि बढी बुझाउन परिरहेको छ, विकास भने आशा गरेअनुरुप हुन सकेको छैेन ।’
सोही वडाकी विन्दा पाण्डेको घरअगाडी पीसीसी सडक बन्ने सुनेर औँधी खुशी थिइन् । सडक निर्माण गर्नका लागि ५ लाख रकम पनि निकासा भयो । तर सडक नबन्दै जनप्रतिनिधिहरु सबै पैसा खाइदिए, विन्दाको आरोप छ । ५ लाखको लागतमा निर्माण गर्न लागिएको पीसीसी ढलान त भएन तर ५० मिटर जती ईछा ओछ्याएर सबै रकम सकियाे भन्दै काम नै रोकेको उनले बताइन् ।
यता जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा ननम्बर २२का वडाध्ययक्ष शिवरतन पाण्डेले आफू स्थानीयहरुको अपेक्षाहरुलाई स्वभाविक रुपमा लिएको बताए । उनले भने, ‘विकास निर्माणका कार्यहरु नभएका होइनन्, भएका छन् । तर नगरपालिकाबाट जति बजेट आउँछ, सोही बजेटबाट विकासका कार्यहरु गर्ने हो नि ? पहिलो वर्ष ३५ लाख, दोस्रो वर्ष ५१ र यो वर्ष ५५ लाख रुपैया छुट्याइएको छ, यो रकमबाट नै पूरै वडामा काम गर्नुपर्छ ।’
वडाध्यक्ष शिवरतन पाण्डेका अनुसार वडामा हुलाकी सडकअन्तर्गत जनकपुरधाम भ्रमरपुरा, विन्दही कुर्था सडकखण्डको कार्य संघ सरकारले गर्दै छ । दूधमती सौन्दर्यीकरणका कार्यहरु आउने दिनमा अगाडि बढाइनेछ । नगर विकास कोषबाट ५२ लाखको सडक निर्माणका कार्यहरु भएको छ । उनले वडामा विभिन्न सडकहरु समेत निर्माण भएको र आगामी आर्थिक वर्षमा बाँकी रहेका सडकहरुको पीसीसी ढलान हुने दावी गरे ।
जनकपुरधामलाई उपमहानगरपालिका बनाउँदा कनकपट्टी, मनहरपुर, कटरैत लगायतका गाउँहरू समेटेर जनकपुरधामको वडा नम्बर १७ मा गाभिए । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ की अनामिका मण्डललाई जागिरका लागि प्रत्येक दिन जनकपुरधाम पुग्नुपर्छ । तर मनहरपुरको देखि जनकपुरधाम आउने सडक बीचबीचमा एकदमै जीर्ण अवस्थामा रहेकोले सास्ती खेप्नुपर्छ । उनले भनिन्, ‘हामी नाम मात्रको उपमहानगरपालिकामा छौँ, वास्तविकता त यही हो, हामी अझै पनि गाउँमा छौँ ।’
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १७ का वडाध्यक्ष परमेश्वर यादवले उपमहानगरबाट जति बजेट आउँछ, त्यहीँबाट विकास गर्ने बताए । ‘बाँकीका लागि बजेट कहाँबाट ल्याउने ?’ उनले भने, ‘वडाको विकासका लागि वडाको बजेट मात्रै पर्याप्त छैन । प्रदेश तथा संघ सरकारले यो वडामा लगानी नै नगरेको अनुभूति भई रहेको छ ।’ उनले ३ वर्षको कार्यकालमा कयाैँ सडकहरु ढलान गरेको दाबी समेत गरे ।
जनकपुरधाममा ९ वटा वडाहरू गाभिएको ३ वर्षभन्दा बढी समय भइसकेको छ । यो ३ वर्षको अवधिमा जनप्रतिनिधिहरुले जनताको मन जित्न सकेका छैनन् । बाँकी रहेको दुई वर्षमा कुनै यस्तो चमत्कार गर्न सक्लान्, जसले स्थानीयहरु आफ्नो जनप्रतिनिधको प्रशंसा गरोस् ! यसका लागि बाँकी २ वर्ष कुर्नै पर्ला ।